ပန်ဒိုရာ: ပိတောက်ပွင့်သစ်ထဲက ဒိုင်ယာရီ
Posted by pandora at 9:41 PM
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ မုဒိတာ ပွားလိုက်ရပါတယ်။ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဗျားး။
မလေးလည်း ပန့်တွက် ပျော်တယ်။
ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ မရယ် =)
Big Congrats ပန်ပန်...
ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေကို စာအုပ်ထဲမှာ ပုံနှိပ်စာလုံးလေးတွေ အနေနဲ့ တွေ့ရတာ တကယ် ပျော်စရာပါ...
နောက်လဲ အများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
လက်မှတ်လေး ထိုးပေးမယ့် စာအုပ် လက်ဆောင် မျှော်နေမယ်...း))
Congratulations!!! ပေးထားတဲ့ Link ထဲမှာ သွားဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်းလွန်းလို့ မှတ်ချက်တောင် ပေးမတတ် ဖြစ်သွားတယ်။
ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် သီချင်းပို့လိုက်ပါတယ်။ Enjoy! http://www.mixpod.com/playlist/38417645
ဘလော့ဂါတွေ တော်တော် လက်စောင်းထက်နေကြပေါ့နော့် လုံးချင်းရေလေး)
ကောင်းလိုက်တာ.. internet နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ လူတွေ အတွက် စာအုပ်တွေကပဲ ဖတ်စရာလေ.. ဒီလို ဝတ္တုကောင်းလေးတွေ blog ပေါ်တင် မက စာအုပ်တွေထဲမှာလည်း ပါသင့်တာပေါ့..။